Maalinta: Diseembar 27, 2017
Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Subway Xaaladda Dhacdadii ugu dambeysay!
Howlaha mashruuca mitrooga ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul iyadoo ay socdaan dadaallada Duqa Magaalada Sultanbeyli Hüseyin Keskin ayaa sii socda. Marxaladda koowaad waxaa la furay dhowaan Üsküdar - Çekmeköy - [More ...]
Taariikhda furitaanka ee tareenka nostalgic ee Taksim dib loo dhigay
Tareenka nostalgic, kaas oo ay joojisay 1 sanado isla markaana loo qorsheeyay in qayb ahaan loo furo berrito, ma awoodi doono inuu galo adeegga sababtoo ah howlaha kaabayaasha ee ay sameeyeen Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ee Taksim. Nostalgic wadada Istiklal ee Taksim, Istanbul [More ...]
Borotokoolka 30 acre Traffic Training Park ee ay dhisi doonto Şanlıurfa Dowlada Hoose iyo Maamulka Horumarinta Gobolka GAP. Duqa magaalada Şanlıurfa Nihat Çiftçi waa darawal muhiim u ah waxbarashada taraafikada. [More ...]
Goob raaxo leh oo loogu talagalay darawalada ka yimaada caasimadda Malatya
Kala sooc guryaha tagaasida iyo kuwa yar yar ee ay leeyihiin Malatya Metropolitan Dowlada hoose sidaa darteed basaska iyo darawalada tagaasida, kuwaas oo ah cunsur muhiim u ah gaadiidka dadweynaha iyo shaqsiyaadka, waxay ku sii wadan karaan shaqadooda jawi deggan oo caafimaad qaba. [More ...]
Turk-iş'ten Qoraalka Staff Staff
Xeerarka qandaraas hoosaadka (Sharciga Xeerarka) ee Golaha iyo doodaha ku dhawaad ​​afduubay Türkiş, farqiga u dhexeeya Xeerka iyo shaqaalaha qandaraas hoosaadka ayaa la sheegay. Iyada oo la raacayo sharciga sharciga hoosaad ee shuruucda qandaraas-hoosaadka (Sharciga Xeerarka) [More ...]
Shaqada waxay ka bilaabantay isgoysyada sare ee Iskotter Beach
Waxaa jiray koror ku saabsan jawaab celinta xad-dhaafka ka dhacay wadada Izmit Beach Road iyo TCDD waxay biloowday shaqada dayactirka, laakiin aroosadda ayaa joogsatay sida ay hadda tahay. [More ...]
Madaarka Atatürk Mawqifka ganacsiga?
Wasiirka gaadiidka Ahmet Arslan, boqolkiiba 73 ayaa dhameystiray 3. Madaarka Atatürk waxaa loo diyaarin doonaa sidii dhul ballaadhan oo loogu talagalay Istanbul marka garoonka la dhameeyo. [More ...]
Kazakhstan Target ka Gaadiidka Konteynarada "ilaa 5 Milyan Dollar sanadkiiba
Dowlada Kazakhstan waxay cadeysay in dhoofinta konteynarada kontaroolada ee xuduudaha wadanka ay aad muhiim ugu yihiin labadaba dalkooda iyo machadyada iyo dowladaha oo door firfircoon kaqaada gaadiidka. [More ...]
Mashruuca shidaalka ee Körfez-Kartepe ayaa sidoo kale dib loo dhigayaa!
Degmada ayaa loo balan qaadayaa 2009 waxaana dib loo dhigi doonaa wadada tareenka-kartepe sidoo kale taraamka Izmit ee ay ku sameyn karto 2017. Mashruucan ayaa laga soo celiyay komishanka Wadahadalka mashruuca metro ee udhaxeeya Körfez-Kartepe oo ay shaacisay Dowlada hoose ee Kocaeli Metropolitan degmada. [More ...]
Vatmana Granderşen Award for Save the Kitten
Markii uu arkay dhaawacii ku soo dhacay taraamka Eskimehir, Duqa Magaalada Büyükerşen wuxuu u hambalyeeyay una abaal mariyey Vatan Cansu Deniz, oo joojiyay gaariga oo badbaadiyay gaarigiisa. 'Nolosha' dariiqa iyagoo codsigooda mar walba caawiya [More ...]
Dhismaha Gaadiidka Samsun
Yuusuf Ziya Yılmaz, Duqa degmada Samsun Magaalo Weyn, ayaa yidhi, All Dhammaan daraasadihii suurtagalka ahaa ee looga baahnaa mashruuca tunnel-ka ayaa socda. Haddii mashruucan la hirgaliyo, degmooyinka Atakum, İlkadım iyo Canik waxay kuxiran doonaan tuneel. [More ...]
Lambarka Wanaagsan ee East Express ayaa kordha
Tirada baabuurta gaashaaman ee East Express ayaa kordhaysa: Habertürk'un 'Sida Express' cinwaanka looga dhawaaqay duullimaadyada Bariga Express, Thanks to xoojinta warka ka yimid Kars. Duqa magaalada Murtaza Karaçanta ayaa yidhi, ilgi xiisaha magaaladeenna ayaa kor ugu kacay wararka. Markay baahida sii korodho [More ...]
RayHaber 27.12.2017 Warbixinta Shirka
Dharka Dhiigga ah waxaa lagu dabaqi doonaa Qadka Hirgelinta Ulukışla Boğazköprü Line 61 + 500 Iskudhufan waxaa lagu dhisi doonaa Adeegga Badbaadada Gaarka ah ee la Helay Adeegga Badbaadada Gaarka ah ayaa la Helayaa
Madaxkentray waxay gaadhi doontaa soonaha cusub ee Yenikent
Agaasimaha Guud ee Turkiga Railways (TCDD), oo ka qaybqaatay qaraarka Baarlamaanka Ankkentray ee Isku-dubaridka Nidaamka Baarlamaanka ayaa lagu saxiixay Dawladda Hoose ee Ankara İsa Apaydındık Waxaan ku samaynay horumar Baaykentray boqolkiiba 90. Waxaan ku rajo weynahay in xaafadahayaga ku xeeran ay wataan tareeno aad u dheereeya [More ...]